6 xiiso leh oo ku saabsan duufaannada oo kaa yaabin doona | Saadaasha Shabakadda
6 xiisaha xiisaha leh ee ku saabsan duufaannada oo kaa yaabin doona
Duufaannadu waa ifafaalooyinka saadaasha hawada ee samaysma gaar ahaan bilaha xagaaga ee Waqooyiga Hemisphere. Lagu arkay sawirro ay qaadeen dayax gacmeedyadu, runti waa kuwo cajiib ah, in kasta oo xaqiiqadu ay tahay waxay sababi kartaa dhaawac culus.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato iyaga, waan kuu sheegeynaa 6 xiisaha xiisaha leh taas ayaa kaa yaabi doonta.
1 1.- Duufaan, Mayan god
2 2.- Duufaanno, ilo biyo oo aan caadi ahayn
3 3.- Duufaannada iyo duufaannada, isku mid ma yihiin?
4 4.- Isha duufaanta, aagga ugu deggan
5 5.- Xilliga duufaanku waa ...
6 6.- Awoodda cajiibka ah ee dabaysha duufaanka
1.- Duufaan, Mayan god
Weligaa ma isweydiisay halka uu ka yimid magaca "duufaan"? Mayaankii ayaa alifay. Iyaga, Wuxuu ahaa ilaaha xukuma dabaysha, dabka iyo duufaanka.
2.- Duufaanno, ilo biyo oo aan caadi ahayn
Dhacdooyinkan cimilada ayaa hoos u dhici kara ilaa 9 tiriliyan litir oo biyo ah maalintiiSidaa awgeed, waa sidaas, aad ayey muhiim u tahay in laga fogaado sida ugu macquulsan, iyo haddii ay dhacdo inaadan awoodin, gudaha ku joog inta ay nabdoon tahay.
3.- Duufaannada iyo duufaannada, isku mid ma yihiin?
Waxay kala yihiin. Ameerika iyo Yurub waxaan u aqaannaa duufaanno, laakiin galbeedka Baasifigga waxaa loogu yeeraa duufaanno. Saynisyahannadu badanaa waxay ugu yeeraan si fudud duufaannada kuleylahaDhanka kale, taasi waa waxa loogu yeero Badweynta Hindiya.
4.- Isha duufaanta, aagga ugu deggan
Bartamaha ama isha duufaanta waa qeybta ugu aamusan. Sidaa darteed, xitaa markaad u maleyneyso in wax walboo horey u dhaceen, dhab ahaantii sidaas maahan. Qaybtani waxay cabiri kartaa ilaa 32km, sidaa darteed waa inaad samir yeelato.
5.- Xilliga duufaanku waa ...
Si ay duufaan u sameysmaan, waxaa lagama maarmaan ah in baddu ay diiran tahay, heerkulka ugu yarna yahay 20ºC. Sidaas darteed, xilli duufaanku wuxuu bilaabmaa Juun wuxuuna dhammaadaa Nofeembar.
6.- Awoodda cajiibka ah ee dabaysha duufaanka
Dabaysha ka timaadda duufaanta ayaa wax ka badan 250km / h, oo sababi kara hirar dherer ka badan 5,5 mitir ah.
Ma ogeyd qaar ka mid ah xiisahaas ku saabsan duufaannada?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » 6 xiisaha xiisaha leh ee ku saabsan duufaannada oo kaa yaabin doona
Jorge Juan Madroñal Fernandez dijo
Subax wanaagsan. Aniga oo ah Sarkaal Badeed Ganacsade iyo xoogaa badmareen ah waxaan soo maray, gaar ahaan Baasifigga, Badda Shiinaha iyo duufaannada adag ee Waqooyiga Atlantik. Salaan damiir leh.? ?
Jawaab Jorge Juan Madroñal Fernández
Salaan Jorge, waad ku mahadsantahay faalladaada 🙂
6 ciyaar fiidiyow ah oo ka dhan ah isbedelka cimilada
Sahel, ayaa ka cagaaran mahadnaq ahaan kululeynta badda Mediterranean-ka